होमपेज / शुक्रबार / 'र' प्रेमी ओझा
'र' प्रेमी ओझा	07 Jul 2013 आइतबार २३ असार, २०७०
असफल श्रीमान् र सफल निर्माता भनिन्छ छवि ओझालाई। उनी 'र'लाई असाध्यै माया गर्छिन्। श्रीमतीका रूपमा 'र' तीनजना महिलासँग जोडिसके। पछिल्लो समय रेखा थापासँगको सम्बन्ध 'र' बाट 'तर' हुँदै फिल्म 'लोफर'पछि व्यावसायिक तथा पारिवारिक रूपमै 'पर' भयो। उनले यो फिल्मबाट नयाँ 'र' भित्र्याएका छन्। ती हुन् रजनी थापा। 'र'बाटै नाम सुरु भएकी थापा नै थरकी युवती रेखालाई काउन्टर दिन ल्याएको हल्ला फिल्मनगरीमा व्यापक छ। सुटिङमा आउजाउ गर्ने र फिल्मको पोस्टर हेर्नेले रजनीलाई रेखासँग तुलना पनि गर्न थालेका छन्। उनीहरू भन्छन्, 'छविले रेखाको उत्तराधिकारी ल्याएका रहेछन्।' यो पनि खुलाइदिए हुन्थ्यो, फिल्ममा मात्रै हो कि घरमा पनि! Tweet Leaveacomment Message *
आफ्नैले धकेले धन्दामारक्सी र जुवाको कुलतमा फसेको श्रीमान् ललाई–फकाई, तर्साई–धम्काई श्रीमतीलाई देहव्यापारमा लगाउँछ। छोरीलाई पुरुषको ओछ्यानसम्म पुर्‍याउँछिन् आमा। बहिनीलाई बेचिदिन्छ दाजु। सम्बन्धहरू कतिसम्म क्रूर भएका हुन्, मान्छेहरू कतिसम्म गिरेका हुन्! राजधानी तथा...	सन्तान किन हुँदैन ?विवाहपछि प्रत्येक दम्पतीको एउटा स्वाभाविक सपना हुन्छ– घरमा बच्चाको हाँसो गुञ्जियोस् । तर, चाहँदाचाहँदै पनि सबैको यो सपना पूरा हुन सकिरहेको हुँदैन । कुनै–कुनै महिलाले सन्तान जन्माउन सक्दैनन् । यस्ता...	झरना 'खलअभिनेता'नायिकाका रूपमा थुप्रै अवार्ड थापेकी झरना थापा यस पटक भने फिल्म करिअरमै फरक विधामा अवार्डका लागि छानिएकी छिन्। अरू अवार्डमा सँगै प्रतिस्पर्धा गर्ने अन्य सहकर्मीले सर्वाेत्कृष्ट अभिनेत्रीको अवार्डका लागि प्रतिस्पर्धा...	'झुर' चलचित्र महोत्सव'राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवको उपलब्धि के?' चलचित्र विकास बोर्डले आयोजना गरेको चलचित्र महोत्सवमा स्थानीय व्यवस्थापकका रूपमा रहेका अनाम धरानका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ तँखाछेलाई सबैको यही प्रश्नले हैरान पारेको छ। उनले भने...	झन् सलबलाए दलालदेश ठूलो विपत्मा छ। तर, नियत खराब भएकाहरूका लागि यही विपद् सुनौलो मौका बनेको छ। भुइँचालोले जसको सबथोक भत्काइदिएको छ, उनैका छोरीचेलीमा आँखा गाढेर बसेका छन् दलालहरू। उनीहरू दुःखमा परेका...	ऊ उता, म यता : माया कता-कता !भनिँदै, सुनिँदै आएको कुरा हो– प्रेमले भूगोल भन्दैन, दूरी भन्दैन, समुदाय भन्दैन, धनी–गरिब भन्दैन । तर, हामी यति सरल दुनियाँमा बाँचिरहेका छैनौँ कि सम्बन्धहरूमा कुनै जटिलता नहुन्। सन्दर्भ हो– भौगोलिक...	मनोनयनमा मनपरी नहोस्महाधिवेशनबाट विजय र पराजयको टुंगो लागेसँगै नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू एक आपसमा सद्भाव साटासाट गर्न व्यस्त देखिन थालेका छन्। पार्टी सभापतिमा निर्वाचित भएसँगै एक सातासम्म शुभकामना ग्रहण गरेर बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा...	रहेनन् 'हलो जोत्ने साथी''नेपाली लोक–गीत ओझेलमा पर्लान् भन्ने पिर लाग्छ,' गायक धर्मराज थापाको भनाइ उद्धृत गर्दै थिए, देउडा गायक नन्दकृष्ण जोशी, 'अहिलेका लोक–गीत, लोक–गीतजस्ता लाग्दैनन्। गाउँघरका भाकालाई जथाभावी शब्द हालेर बंग्याइएको छ।' केही...	शुक्रबार	'शृंगारले आत्मविश्वास बढाउँछ'शृंगारमा प्रयोग हुने फेसियल प्रोडक्ट 'आस्टाबेरी'ले नेपाली बजारमा आफ्नो हिस्सा जमाउँदै आएको छ। भारतीय उत्पादन आस्टाबेरीको...	बजेटपछि बिरामीजेठको धूप थेगिसाध्य थिएन। शीतल ताप्नेहरूले चौतारी खचाखच थियो। खेतमा डढेका मकै, सुक्दै गएका पानीका मुहान,...	बजेटपछि बिरामीजेठको धूप थेगिसाध्य थिएन। शीतल ताप्नेहरूले चौतारी खचाखच थियो। खेतमा डढेका मकै, सुक्दै गएका पानीका मुहान,...	एकताको लड्डुपछि फलामको च्यूराएकीकृत नेकपा माओवादीले आफ्नो पुरानो स्वरूपलाई ध्वस्त गरेर नयाँ नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा रूपान्तरण भएको घोषणा...	भर्खरै...